​ေၾကညာခ်က္​ — Steemkr
လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေကြောင်းပြသပါ။ ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးက virtual အသံလှိုင်းများဖမ်းမိအမှန်
သူတို့ကသူတို့မော်ဒယ်မှ Rayleigh-Presset ဆက်ပြောသည်သည့်အခါနှင့် သူတို့ crack သည့်အခါအမှန်တကယ်လက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်သောလမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့ကို virtual လက်ပြောင်းရွေ့, သင်္ချာပူဖောင်းသင့်လျော်သောအသံထုတ်လုပ်မယ်လို့ပဲထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ပြိုကျ။ ဒီတော့ပြဿနာကိုလက်ျာဘက်, ဖြေရှင်း? အတော်လေးမဟုတ်ပါဘူး။ လူအားလုံးတို့သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် 1971 သုတေသီများပြီးသားဆိုခဲ့သောအရာကိုသက်သေပြခဲ့သည်ကဤအချက်မှာပြုမိခဲ့သည်။ အဘယ်အရာပူဖောင်းအက်ကွဲပြီးနောက်လက်ခေါက်ဆစ်အတွက်နေရစ်သော disproof-နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်များကော? သာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှန်ပါသည်, ပူဖောင်းပြိုကျ, ဒါပေမယ့်: အသစ်မော်ဒယ်တစ်ဦးလည်းကြောင်းဖွကွေား။ မပြည့်စုံလျှင် MRIs နေဖြင့်တွေ့ရှိခံရဖို့နောက်ကွယ်မှအလုံအလောက်ပူဖောင်းထွက်ခွာနေစဉ်ရုတ်တရက်သည်, ပူဖောင်း၏ကျုံ့တစ်ဦးကိုအလွယ်တကူကွားနိုငျသောအသံထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာမည့်အက်ကွဲများအတွက်ကြာနှစ်ဆယ်မိနစ်သို့မဟုတ်ဒါကြောင့်အသစ်ကပူဖောင်းဖန်တီးကျန်ရစ်သူသူတွေကိုချဲ့ထွင်ရန် tribonucleation ကြာကာလဖြစ်၏။ နောက်ဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်-ဘယ်လိုဏုဖြစ်စဉ်ကိုနိုင်အောင်မဖြစ်နိုင်သောအမှန်တကယ်အလွယ်ကူဆုံးတဦးတည်းကျယ်လောင်-ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အသံကထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ တည်ဆဲ acoustic ဖိအားညီမျှခြင်းဟာပူဖောင်းပြိုကျအမြန်နှုန်းကဖြစ်ပျက်-The သောပတျဝနျးကငျြသွေ့ခြောက်သောအရိုးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးထားသည့် enclosing အမဲသားက 83 ဒက်စီဘယ်ယူနစ်ရောက်ရှိတဲ့အက်ကွဲထုတ်လုပ်ရန်တကယ်လှိုင်းတံပိုးမှထုတ်လုပ်သူတို့၏သင်္ချာလက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လက် crack သည့်အခါ graphed အခါ။ 50 ပေအကွာအဝေးကနေကြားသိ 40 တစ်နာရီမိုင်မှာရွေ့လျားနေတဲ့ဒီဇယ်ထရပ်ကား၏အသံအတိုးအကျယ်မှအကြမ်းဖျင်းညီမျှသည်သဲလွန်စခဲ့ကြသည် နီးပါးတူညီ။ ဤလုပ်ငန်းကိုလက်တွေ့ application ကိုချက်ချင်းထငျရှားပါသညျ။ ဒါဟာအိုကေဒါထင်ရှားမယ့် ... um, ပါပဲ။ အဆိုပါသုတေသီများနည်းလမ်းများသူတို့ devel တွင်ရှိသည်သောအကြံပြုကြပါ